·H Uhlobo Lwebreaker
·V Uhlobo Lwebreaker
I-H Type Breaker
I-S Type Breaker
I-V Type Breaker
Indlela yokuhlukanisa ye-hydraulic breaker
Isikhathi sokuthumela: 11-10-2021
Indlela yokuhlukanisa ithuluzi le-hydraulic breaker Ngokusho kwemodi yokusebenza: ama-hydraulic breaker ahlukaniswe abe izigaba ezimbili: eziphathwayo kanye nezindiza; ngokwesimiso sokusebenza: ama-hydraulic breakers ahlukaniswe abe yizigaba ezintathu: i-hydraulic egcwele, i-hydraulic negesi ehlanganisiwe kanye ne-nitr...Funda kabanzi »
Indlela yokusebenzisa isando se-excavator ukugwema umonakalo
Isikhathi sokuthumela: 11-03-2021
Sisetshenziswa kanjani isando se-excavator ukugwema ukulimala 1 Ngaphambi kokuthi usebenze, hlola ukuthi amabhawodi namajoyinti akhululekile yini, nokuthi kukhona yini ukuvuza epayipini elisebenza ngamanzi. 2. Ungasebenzisi ama-hydraulic breaker ukuchoboza izimbobo kumatshe aqinile. , I-breaker ayikwazi ukusebenzisa i-breaker lapho isibhamu...Funda kabanzi »
Ububanzi bokusetshenziswa kwama-breaker circuit avulekile
Isikhathi sokuthumela: 10-26-2021
Ngomhla zingama-26 kuMfumfu, 2021, Ububanzi bokusetshenziswa kwe-breaker type evulekile ifanele ukulawula nokuvikela uhlelo lokudluliswa kwamandla nokusabalalisa lwezigaba ezintathu ze-AC 40.5KV, futhi ingasetshenziselwa umcimbi wokuxhuma ama-circuit breaker nokushintsha. inhlanganisela ye-capacitor ....Funda kabanzi »
Umgomo wokusebenza wesando se-hydraulic
Isikhathi sokuthumela: 10-20-2021
Izando zeHydraulic zingezando zokuhlanganisa isisekelo. Ngokusho kwesakhiwo sabo kanye nesimiso, abakhiqizi besando sokuhlanganisa i-hydraulic bangahlukaniswa ngomsebenzi owodwa kanye nomsebenzi ophindwe kabili. Ukulibeka ngembaba, uhlobo lwe-single-effect lisho ukuthi umgogodla wesando womthelela ukhululwa ngokushesha ...Funda kabanzi »
Isimiso sesando se-hydraulic
Isikhathi sokuthumela: 10-08-2021
Ngomhla ziyisi-8 ku-Okthoba, 2021, izando ezisebenza ngogesi ziyizando zokunqwabelanisa zohlobo lomthelela, ezingahlukaniswa zibe izinhlobo ezisebenza kanyekanye nezisebenza kabili ngokuya ngesakhiwo sazo nomgomo wokusebenza. Okubizwa ngokuthi uhlobo lwe-single-acting kusho ukuthi umgogodla wesando womthelela ukhululwa ngokushesha ngemuva kokuphakanyiselwa ...Funda kabanzi »
Yini okudingeka ihlolwe ngaphambi kokusebenzisa i-rock crusher?
Isikhathi sokuthumela: 09-22-2021
Ngomhla zingama-22 kuSepthemba 2021, yini okudingeka ihlolwe ngaphambi kokusebenzisa i-rock crusher? 1. Izingxenye zemishini Ngaphambi komsebenzi, kufanele sihlole ukuthi amabhawodi okulungisa azo zonke izingxenye ze-rock crusher akhululekile, ukuze sigweme izenzakalo ezingavamile phakathi nomsebenzi. 2. Okokugcoba Ngaso sonke isikhathi hlola uwoyela wokugcoba endaweni...Funda kabanzi »
Hlaziya isimiso sokusebenza sama-breaker circuit
Isikhathi sokuthumela: 09-13-2021
Septhemba 13, 2021, Hlaziya umgomo wokusebenza wama-circuit breaker ohlobo lwebhokisi Ama-circuit breaker ngokuvamile akhiwa isistimu yokuxhumana, isistimu yokucisha i-arc, indlela yokusebenza, iyunithi yohambo, igobolondo nokunye. Lapho isifunda esifushane senzeka, inkambu kazibuthe ekhiqizwa umsinga omkhulu (igenera...Funda kabanzi »
Ukuthuthukiswa nokugcinwa kwe-rock crusher
Isikhathi sokuthumela: 09-07-2021
Ngomhla ka-7 Septhemba 2021, Ukuthuthukiswa kwezishibhisi zamatshe kubonakala kakhulu kulezi zici ezilandelayo: 1. Amandla emakethe e-crusher yezwe lami makhulu uma kuqhathaniswa, futhi bekukhathazwe kakhulu abakhiqizi bamazwe ngamazwe abagawula amatshe. Ngaphezu kwalokho, ijubane lokushintshwa kwe...Funda kabanzi »
Ukusetshenziswa okufanele kwe-Hydraulic Hammer
Isikhathi sokuthumela: 08-31-2021
Manje thatha uchungechunge lwasekhaya lwe-S Hydraulic Hammer njengesibonelo ukukhombisa ukusetshenziswa okulungile kwe-hydraulic breaker. 1) Funda imanuwali yokusebenza ye-hydraulic breaker ngokucophelela ukuze uvimbele ukulimala kwe-hydraulic breaker kanye ne-excavator, futhi uzisebenzise ngempumelelo. 2) Ngaphambi kokusebenza, hlola ...Funda kabanzi »
Ingabe isando se-hydraulic sisetshenziswa ngendlela efanele?
Isikhathi sokuthumela: 08-24-2021
Ngomhla zingama-24 ku-Agasti 2021, ingabe isando esisebenza ngogesi sisetshenziswa ngendlela efanele? Isando se-hydraulic ikakhulukazi sakhiwe izingxenye ezilandelayo: isando sekhanda / uhlaka lwenqwaba / isilinda sokuphakamisa ikhanda lesando nokunye. Ikhanda lesando lifakwe kumzila wokuqondisa oqondile wefreyimu yenqwaba ukuze kuqinisekiswe amandla anele. Nini...Funda kabanzi »
Izici ezihlukile zokuxhumanisa ze-soosan breaker
Isikhathi sokuthumela: 08-19-2021
1. Izinto ezithonya izici zokumataniswa komehluko wezinga Ohlelweni lwe-Xiushan, ngenxa yezidingo ezahlukene zobuchwepheshe zezikhungo zokuphakela amandla ekukhetheni umthamo webhethri wesiteshi ngasinye esingaphansi, imodi yokuphakela amandla yesikrini se-DC kanye nesilinganiso kanye ne-contro. ...Funda kabanzi »
Izimbangela zokuhluleka kwezinga lokushisa eliphezulu lokubamba ama-hydraulic
Isikhathi sokuthumela: 08-14-2021
n ukukhiqizwa kwethu nokuphila, sivame ukusebenzisa ama-hydraulic grabs. Ukubamba nge-hydraulic kudlala indima ebalulekile ekukhiqizweni kwezimboni. Ukubamba okune-hydraulic kungangena esikhundleni sokubamba ngesandla nokuphatha, okungashiwo ukuthi kuwusizo kakhulu. Ihlobo liyashisa futhi liyashisa, futhi ama-hydraulic grabs ajwayele ukwehluleka. Namuhla, asi...Funda kabanzi »
Izindlela ezijwayelekile zokukhipha i-hydraulic rock crusher
Isikhathi sokuthumela: 08-07-2021
Ungayithathi kancane inkinga yokukhishwa kwe-hydraulic rock crusher. Uyazi ukuthi usayizi wembobo yokukhipha i-hydraulic rock crusher inquma usayizi we-ore echotshoziwe kanye namandla okukhiqiza amathuluzi? Ngenxa yokuguga noshintsho kusayizi wezinhlayiyana ezidingekayo...Funda kabanzi »
Indlela elungile yokusebenza ye-hydraulic breaker
Isikhathi sokuthumela: 07-30-2021
Funda imanuwali yokusebenza ye-hydraulic breaker ngokucophelela ukuze uvimbele ukulimala kwe-hydraulic breaker kanye ne-excavator, futhi uzisebenzise ngempumelelo. Ngaphambi kokusebenza, hlola ukuthi amabhawodi nezixhumi zikhululekile yini, nokuthi ingabe kukhona ukuvuza epayipini le-hydraulic. Ungasebenzisi i-hydraulic bre...Funda kabanzi »
I-Komac TOR42 hydraulic breaker ilungele ukufanela i-excavator engu-40t.
Isikhathi sokuthumela: 07-23-2021
Ngokungafani nochungechunge lwe-KB, i-TOR Series yama-hydraulic breaker ane-valve yokulawula isistimu yokudubula yokudubula engenalutho, eqinisekisa ukuthi isando se-excavator asilinyazwa ngokusetshenziswa okungalungile. I-TOR Series iphinde izuze ngokuba nesistimu eyakhelwe ngaphakathi yokugcoba i-auto-greasing ethuthukisa ukuqina kwe-breaker. Njengoba...Funda kabanzi »
Imisebenzi okudingeka igwenywe kuma-breaker
Isikhathi sokuthumela: 07-15-2021
Uma sisebenzisa i-breaker, kufanele sifunde ngokucophelela imanuwali yokusebenza ye-breaker ukuvimbela umonakalo ku-breaker kanye ne-excavator, futhi siyisebenzise ngokuphumelelayo. Yimiphi imisebenzi okufanele igwenywe ngu-opharetha ngesikhathi somsebenzi: 1. Sebenza ngaphansi kokudlidliza okuqhubekayo I-high-pressure kanye ne-low-pressure ho...Funda kabanzi »
Indima ye-crusher yamatshe kulayini wokukhiqiza amatshe
Isikhathi sokuthumela: 07-09-2021
Namuhla, umphakathi uthuthuka ngokushesha, futhi izingqimba zamatshe zivezwa phambi kwabantu ezindaweni eziningi. Izimboni eziningi zidinga ama-crushers amatshe. Ngakho-ke, yimiphi imisebenzi yama-crushers emgqeni wokukhiqiza amatshe? Nikeza incazelo evamile kumakhasimende ethu nabangane. Wonke umuntu uyazi...Funda kabanzi »
Umgomo wokusebenza we-excavator breaker
Isikhathi sokuthumela: 07-03-2021
Igobolondo le-excavator breaker limboza ngokuphelele umzimba wesando, futhi igobolondo lihlonyiswe ngento emanzisa amanzi, edala ibhafa phakathi komzimba wesando negobolondo futhi liphinde linciphise ukudlidliza kwesithwali. I-excavator breaker inikwa amandla yi-hydrostatic pressure ukushayela ...Funda kabanzi »
I-Furukawa HB30G i-hydraulic rock breaker ye-28~35 ton excavator
Isikhathi sokuthumela: 06-02-2021
Uchungechunge lwe-Furukawa HB luwumkhiqizo wakudala nodumile onesici sawo samandla angaguquki, ukuqina isikhathi eside kanye nokugcinwa kalula. Yize imodeli manje isithuthukisiwe futhi yafakwa esikhundleni sochungechunge lwe-F & FX, kodwa isakhiqizwa futhi isetshenziswa kabanzi ngenani elikhulu. OKUQONDILE...Funda kabanzi »
I-Hydraulic Breaker Hammer Through Thrust Bushing Bush Ring
Isikhathi sokuthumela: 05-21-2021
I-Bushings iqinisekisa ukuhleleka okufanele kwethuluzi lomsebenzi, njengoba i-bushing ifinyelela umkhawulo wokuguga, ingashintshwa ukuze ibuyiselwe ekucacisweni kwayo. Sikulungele ukukunikeza izingxenye ezisele ze-hydraulic breaker ezikhiqizwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu nomsebenzi osezingeni eliphezulu ukuze siqinisekise...Funda kabanzi »
I-PISTON YEZANDISO ZAMAHYDRAULIC
Isikhathi sokuthumela: 05-14-2021
I-PISTON YE-HYDRAULIC HAMMERS Ipiston yezingxenye eziyisipele zamamodeli e-FURUKAWA, SOOSAN, EVERDIGM, MONTABERT, INDECO, GB, NPK, TEISAKU njll. ...Funda kabanzi »
I-Hydraulic Plate Compactor
Isikhathi sokuthumela: 04-22-2021
I-plate compactor, ipuleti elidlidlizayo, noma i-tamper, ine-baseplate enkulu edlidlizayo futhi ifanele ukudala izinga leleveli, kuyilapho i-rammer compactor inonyawo oluncane. Ama-hydraulic plate compactor aklanyelwe ukuhlanganisa inhlabathi, imisele kanye nezingongolo, kanye nokushayela nokukhipha i...Funda kabanzi »
I-Furukawa HB20G i-hydraulic rock breaker ye-18~25ton excavator
Isikhathi sokuthumela: 04-14-2021
Uchungechunge lwe-Furukawa HB luwumkhiqizo wakudala nodumile onesici sawo samandla angaguquki, ukuqina isikhathi eside kanye nokugcinwa kalula. Yize imodeli manje isithuthukisiwe futhi yafakwa esikhundleni sochungechunge lwe-F & FX, kodwa isakhiqizwa futhi isetshenziswa kabanzi ngenani elikhulu. INKCAZO...Funda kabanzi »
Isibambi Sethuluzi sekhanda langaphambili lesando esiphukayo
Isikhathi sokuthumela: 04-01-2021
I-FURUKAWA SOOSAN MODEL: F22 F27 HB20G HB30G HB40G SB40 SB50 SB81 SB121 INHLOKO ENGAPHAMBILI YE-HYDRAULIC HAMMER Izici: 1. Impahla ye-CrMo egqokwa isikhathi eside 2. Umshini we-CNC onokunemba 3. Ukulawula ukuqina kwe-postproject ehlanganisiwe ngokugcwele 4. 5. ISO 9001 ...Funda kabanzi »
AbakwaHyundai 'bazokhulisa iDoosan Infracore'
Isikhathi sokuthumela: 03-04-2021
Inkampani yakwaHyundai Heavy Industries isiqinisekise ukuthatha kwayo i-Doosan Infracore nge-KRW850 billion (€635 million). Ikanye nozakwethu we-consortium, i-KDB Investment, i-Hyundai isayine inkontileka esemthethweni yokuthola isabelo esingu-34.97% enkampanini ngomhla ka-5 February, okuyinika ukulawula inkampani. Ngokusho...Funda kabanzi »
I-Bauma ConExpo India 2021 ikhanseliwe
Isikhathi sokuthumela: 02-23-2021
I-Bauma ConExpo India 2021, obekumele yenzeke ngo-Ephreli, ikhanseliwe ngenxa yokungaqiniseki okuqhubekayo okudalwe yilo bhubhane. Umbukiso uhlehliselwe u-2022 eNew Delhi, nezinsuku ezisazoqinisekiswa. Umhleli womcimbi uMesse Munich International uthe, "Kuqinisekisiwe ukuthi ...Funda kabanzi »
Izibikezelo Ezinhlanu Zonyaka Ongabikezelwa Wango-2021
Isikhathi sokuthumela: 01-27-2021
Yini elindelwe imboni yezokwakha? Ngabe ama-OEM nezinkampani eziqashisayo zizozijwayela kanjani ukuze zisize kangcono amakhasimende azo? Zishintsha kanjani izidingo zamakhasimende? Futhi lapho kubhekwe ubhubhane lomhlaba wonke - ukululama kubukeka kanjani? Obani abayovela benamandla, futhi bayokwenza kanjani lokho? Ubufakazi be-Telematics bomhlaba...Funda kabanzi »
Ama-excavators amancane: Usayizi omncane, ukuthandwa okukhulu
Isikhathi sokuthumela: 01-18-2021
Ama-excavator amancane angenye yezinhlobo zemishini ekhula ngokushesha, nokuduma komshini kubonakala kukhula njalo. Ngokusho kwedatha evela ku-Off-Highway Research, ukuthengiswa komhlaba wonke kwe-mini excavator bekusezingeni eliphakeme kunawo wonke ngonyaka odlule, ngamayunithi angaphezu kuka-300,000. Izimakethe ezinkulu zama-mini...Funda kabanzi »
Osonkontileka baseMelika balindele ukuthi isidingo sehle ngo-2021
Isikhathi sokuthumela: 01-10-2021
Iningi losonkontileka baseMelika balindele ukuthi isidingo sokwakhiwa kwehle ngo-2021, yize umqedazwe we-Covid-19 udala ukuthi amaphrojekthi amaningi abambezeleke noma akhanselwe, ngokusho kwemiphumela yocwaningo ekhishwe yi-Associated General Contractors of America kanye neSage Construction and Real Estate. I-perc...Funda kabanzi »
IHyundai Heavy iyavala ekutholweni kwe-Doosan Infracore
Isikhathi sokuthumela: 01-03-2021
Imishini yokwakha evela ku-Doosan Infracore A consortium eholwa isikhondlakhondla senkampani eyakha imikhumbi yaseNingizimu Korea i-Hyundai Heavy Industries Group (HHIG) sekuseduze ukuthi ithole ingxenye engu-36.07% enkampanini yokwakha yakuleli i-Doosan Infracore, eqokwe njengombhidi othandwayo. I-Infracore inzima kakhulu ...Funda kabanzi »
I-Bauma China ibika izivakashi ezingu-80,000
Isikhathi sokuthumela: 12-28-2020
Abavakashi ababalelwa ku-80,000 bahambele umbukiso wenyanga edlule iBuama China eShanghai. Kube ukuncishiswa kwama-62% ukusuka kwabangu-212,500 2018, kodwa umhleli uMesse München uthe kube ngumphumela omuhle uma kubhekwa lolu bhubhane. Lo mbukiso uthinteke kakhulu yi-Covid-19, evimbe abahambi abavela ngaphandle ...Funda kabanzi »
I-INTERMAT Paris 2021 ikhanseliwe, uhlelo olulandelayo oluzobanjwa ngo-2024
Isikhathi sokuthumela: 12-18-2020
Ngenxa yokungaqiniseki okuningi okuvela ngenxa yobhubhane lwe-Covid-19 nokungenzeka ukuthi kuqhubeke engxenyeni yokuqala ka-2021, abahleli be-INTERMAT bathathe isinqumo esidabukisayo sokukhansela uhlelo oluzobanjwa kusukela ngomhlaka-19 kuya zingama-24 ku-Ephreli 2021 eParis. , kanye nokuhlela uhlelo lwayo olulandelayo i...Funda kabanzi »
Ngo-2020's 5 Izinkampani Ezinkulu Zezimayini ZaseCanada
Isikhathi sokuthumela: 12-08-2020
Ngu-Investopedia Kubuyekeziwe Nov 16, 2020 I-Canada ithola omningi ingcebo yayo ezinsizeni zayo zemvelo eziningi futhi, ngenxa yalokho, inezinye zezinkampani ezinkulu zezimayini emhlabeni. Abatshalizimali abafuna ukuchayeka emkhakheni wezimayini waseCanada bangase bafune ukucabangela ezinye zezinketho. I-follo...Funda kabanzi »
Izintengo ze-iron ziya ngokuya zihamba phambili
I-Mining News Pro - Izintengo ze-iron ore zihambe kahle ngoLwesihlanu njengesidingo esingakaze sibonwe esivela e-China, okunqande ukuhlinzekwa okuvela eBrazil kanye nobudlelwano obungebuhle phakathi kweCanberra neBeijing kuphazamise imakethe yasolwandle. I-Benchmark 62% yenhlawulo ye-Fe engeniswe eNyakatho ye-China (CFR Qingdao) ibishintsha...Funda kabanzi »
Imboni yemishini yokwakha yaseChina ithokozela ukuthengiswa okuqinile kuka-2020 kodwa umbono awuqinisekile
Isikhathi sokuthumela: 12-02-2020
I-SHANGHAI (Reuters) - Ukuthengiswa kwemishini eqinile yaseChina kulindeleke ukuthi kuqhubeke kuze kube okungenani ekuqaleni konyaka ozayo kodwa kungase kuphazamiseke ngenxa yokwehla komkhankaso wokutshala izimali wengqalasizinda yaseBeijing, kusho abaphathi bezimboni. Abenzi bemishini yokwakha bahlangabezane nokungalindelekile...Funda kabanzi »
Ukuthengiswa Kwabenzi Bemishini Yokwakha Kuyanda Ekuvuseleleni Umnotho WaseChina
Isikhathi sokuthumela: 11-20-2020
Ukuthengiswa Kwabenzi Bemishini Yokwakha Kuyanda Ekuvuseleleni Umnotho WaseChina Ngu-Bai Yujie, uLuo Guoping kanye No-Lu Yutong Abahloli bahlola umshini wokumba ngaphambi kokuthi uphume efektri i-Zoomlion e-Weinan, esifundazweni saseShaanxi eNyakatho-ntshonalanga yeChina, ngoMashi 12. Abenzi abathathu abaphambili baseChina bemishini yokwakha. ..Funda kabanzi »
I-Komatsu ilahlekelwa indawo ku-Sany, iphuthelwa yi-boom yokwakhiwa kwe-China
Isikhathi sokuthumela: 11-13-2020
Umenzi wezinto ezisindayo waseJapan ubheka idijithali njengoba imbangi ithatha isabelo sikaKomatsu sangemva kwe-coronavirus emakethe yaseChina yemishini yokwakha sehle saya ku-4% sisuka ku-15% esikhathini esingaphezudlwana nje kweshumi leminyaka. (Isithombe ngu-Annu Nishioka) U-HIROFUMI YAMANAKA kanye no-SHUNSUKE TABETA, ababhali bezisebenzi ze-NikkeiMay 19,...Funda kabanzi »
BANGAPHEZU KUKA-2,800 ABABUKISI ABAZOBAMBA IQHAZA E-BAUMA CHINA 2020
Isikhathi sokuthumela: 11-11-2020
Amalungiselelo e-bauma CHINA 2020, ezoba ngoNovemba 24 kuya ku-27 eShanghai, asethuthukile. Bangaphezu kuka-2,800 abakhangisi abazobamba iqhaza embukisweni wezohwebo ohamba phambili wase-Asia embonini yemishini yokwakha neyezimayini. Naphezu kwezinselelo ngenxa ye-Covid-19, umbukiso uzogcwalisa wonke ...Funda kabanzi »
Indlela yokuvikela i-excavator lapho usebenzisa i-breaker ukugwema ukulimala ku-excavator?
Isikhathi sokuthumela: 05-11-2020
1. Umthamo kawoyela we-hydraulic kanye nokungcola Njengoba ukungcoliswa kwamafutha we-hydraulic kungenye yezimbangela eziyinhloko zokuhluleka kwepompo ye-hydraulic, kuyadingeka ukuqinisekisa isimo sokungcoliswa kwamafutha we-hydraulic ngesikhathi. (Shintsha uwoyela we-hydraulic emahoreni angama-600 kanye nesici sokuhlunga emahoreni ayi-100). Ukuntuleka kukawoyela we-hydraulic kuzo ...Funda kabanzi »
Indlela yokuxazulula inkinga kawoyela omnyama kuma-hydraulic breakers
Isikhathi sokuthumela: 03-12-2019
I-Hydraulic breaker isiyithuluzi elibalulekile lomsebenzi we-hydraulic excavators. Abanye abantu baphinde bafake ama-hydraulic breaker kuma-backhoe loaders (owaziwa nangokuthi amatasa emikhawulweni yomibili) noma izilayishi zamasondo zokuphahlaza imisebenzi. Uma usebenzisa i-hydraulic breaker ku-excavator, uzothola ukuthi i-hydrauli...Funda kabanzi »
Yini okufanele uyigweme uma usebenzisa isando se-hydraulic:
Isikhathi sokuthumela: 07-25-2018
Ekusetshenzisweni kwesando se-hydraulic kunezici eziningi ezizothinta ukusebenza kahle kwayo komsebenzi, futhi kubangele nomonakalo othile, lapho kufanele sigweme ukusebenza, ukuze sivikele kangcono isando se-hydraulic? 1. Gwema ukusebenza esimweni sokudlidliza okuqhubekayo Hlola ukuthi ingcindezi ephezulu ...Funda kabanzi »
Izimbangela zephutha lemvamisa yesiteleka sesando sokuchotshozwa kwe-hydraulic:
Isikhathi sokuthumela: 03-23-2017
Njengethuluzi elibaluleke kakhulu labavubukuli, isando esichotshozayo singasusa ngempumelelo amatshe antantayo kanye nenhlabathi emifantwini yamadwala. Abanye abasebenzisi babike ukuthi imvamisa yesimangalo izobe ingalungile uma isetshenziswa. Siyini isizathu salokhu? Isizathu esikhulu salesi simo ukuthi i-drill rod...Funda kabanzi »
Iselula: +86 18601660817
- Imephu yesayithi
I-Log Grapple, I-Hydraulic Rock Hammer, I-Hydraulic Breaker Enamandla, I-Mini Excavator Grapple, I-Furukawa Hb40g, I-Mini Excavator Breaker,